Kalandrie Vantage, kalandrie hafa tsy andoavam-bola mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Kalandrie Vantage, kalandrie hafa tsy andoavam-bola mandritra ny fotoana voafetra
Nanomboka ny Alatsinainy teo izahay tamin'ny fampahafantarana momba ny fampiharana kalandrie vaovao izay afaka alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra. Miresaka momba ny fampiharana kalandrie hafa izahay, izay ahitan'ny fijery mahazatra isam-bolana ny fomba fijery isan'andro izay very any aoriana. Vantage Calendar dia misy vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 3,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana. Ity rindranasa ity dia tsy manome antsika asa mitovy amin'izay hitantsika amin'ny rindranasa hafa mamela antsika hitantana ny kalandrie amin'ny fomba milamina sy tsotra toy ny Calendars 5 na Fantastical, fa izahay dia mpampiasa izay matetika tsy manoratra zavatra maro ao, ny famolavolana ny Kalandrie Vantage dia tianay hampiasa azy io ho toy ny fampiharana default.
Amin'ny voalohany dia mety mila fotoana kely fotsiny isika vao zatra fa rehefa mandeha ny fotoana dia mampiseho ny fanendrena amin'ny kalandrie hahafanta-javatra ary koa ny manaitra ary koa ampahatsiahivo anay ny isa azon'ny Staraga saga. Vantage Calendar dia manolotra antsika ny kalandrie hita maso, izay misy koa widgets ho an'ny ivon'ny fampandrenesana. Azontsika atao ny manamboatra azy io amin'ny lohahevitra sy fiaviana isan-karazany, ankoatry ny afaka manampy sticker hafa mba hahitana toerana haingana kokoa na fampahatsiahivana ny kalandrie.
Vantage Kalandrie dia manolotra antsika fividianana fampiharana isan-karazany hanamboarana ny loko sy ny lohahevitra, fa amin'ireo izay atolotray ho antsika, amin'ny mihoatra ny ampy. Ny teboka ratsy hitako amin'ity rindranasa ity dia ny hahafahana manampy fotoana amin'ny kalandrie ary averimberina isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana na isan-taona. tsy maintsy mamaky ilay boaty isika ary mandoa ny 1,99 euro izay mitaky mamoha io safidy io. Na dia tsy te-handoa azy aza isika dia afaka manampy ny fanendrena an'io karazana io amin'ny alàlan'ny fampiharana iOS tompon-tany ary dia mamonjy ny 1,99 euro, tafahoatra loatra amin'ny famohana io asa io izay azo alaina amin'ny kalandrie rehetra, anisan'izany ireo maimaim-poana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Kalandrie Vantage, kalandrie hafa tsy andoavam-bola mandritra ny fotoana voafetra
Ireo mpitantana mailaka telo tsara indrindra ho an'ny iOS
Fantatrao ve ireo fiasa rehetra tonga tamin'ny Maps niaraka tamin'ny iOS 10?